MPIS, chishandiso chinonakidza cheManjaro post-kuisirwa | Linux Vakapindwa muropa
MPIS, chishandiso chinonakidza cheManjaro post-kuisirwa
Vashandisi veManjaro vanowedzera, vachiva chimwe chezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa pakati peavo vanobva paArch Linux. Iyo Manjaro Nharaunda zvakare yakakura kwazvo, chimwe chinhu chakanakira vashandisi nekuti iyo yakakura nharaunda, zviri nyore uye zvinoshanda zvakanyanya kugovera kuri (zvirinani zvakawandisa).
Nhasi tinokuunzirai chinonakidza uye chinobatsira chishandiso chekuisa nyowani yeManjaro. Chombo ichi chinonzi MPIS uye ndeye post-yekumisikidza script inoita kuti zvive nyore kwatiri kuisa mapakeji uye mapurogiramu ekuwedzera.
MPIS inomirira Manjaro Post Faka Chinyorwa. Zviri chinyorwa chakagadzirwa neiyo blog KernelPanic iyo yakwanisa kuve mune zviri pamutemo marekodhi ekuparadzira. Iko kukosha kwanga kusiri kwemahara, ndoda nekuti MPIS inobatsira vese vashandisi vevashandisi uye mushandisi nyanzvi kusimudzira Manjaro muchikwata chedu. Uye zvakare, MPIS isu inobatsira switch desktop uye windows maneja, shanduko iri nyore kune vashandisi veavice.
MPIS ine yakakosha interface inokodzera vese vashandisi
MPIS tinogona kuzviita sekunge takaisa package. Nekudaro, isu tinovhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera kuti tiiwane:
Izvi zvichatanga iyo yekuisirwa yekumisikidza uye its dependency. Kana tangoisa MPIS uye kutsamira kwayo, isu tinongofanirwa kunyora "MPIS" mune terminal kuti tishandise script.
MPIS ine yakakosha menyu iyo inoshanda nenhamba. Nekudaro, kuisa chirongwa cheInternet, semuenzaniso, isu tinofanirwa kutanga tinya iyo nhamba inoenderana neiyo Internet chikamu uye tobva taunza huwandu hwechirongwa icho chatiri kuda Haisi yakajeka graphical interface asi iri nyore uye inoshanda, inokodzera chero mhando yemushandisi.
Ini pachangu, zvinoita kunge kwandiri chishandiso chinonyanya kubatsira, kunyangwe paine nguva dzose sarudzo yekuzviita neruoko, chokwadi ndechekuti neMPIS kuiswa-kwekuiswa kweManjaro kunokurumidza Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » MPIS, chishandiso chinonakidza cheManjaro post-kuisirwa
Imwe bakoat, MPIS haisi mumahofisi epamutemo asi munharaunda, ndokuti muAUR. Unogona here kugadzirisa izvozvo? Ndatenda!! Kwaziso kubva kuchikwata chese MPIS chekuvandudza.
kurodha pasi kuyedza, ndatenda
Yaourt haisi repamutemo repamutemo, inharaunda inochengetwa repositi. Muchokwadi, mamwe mapakeji anogona kubatanidzwa mumahofisi epamutemo gare gare, asi ari kana akaiswa kuvhoti.
Maitiro ekuziva kana yedu Linux ine malware kana rootkits